Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fandaniana nataon'i Hong Kong dia nitombo 5.8% ary tsy nitsaha-nitombo
Tamin'ny taona 2018, nahatratra 92.21 tapitrisa ny fiaingan'ny olom-pirenena Hong Kong tamin'ny taona 2018, 12.4 ny salanisan'ny olona iray! Ny fidiram-bola totalin'ny fitsidihana fonosana ivelan'ny tanàna tamin'ny taona dia nitombo 8.1%! Ny fanadihadiana an-tserasera tamin'ny volana novambra lasa teo dia nanadinadina olom-pirenena Hong Kong miisa 1000 nahita ho an'ny 23% n'ireo mpihetsiketsika any ampitan-dranomasina ny fandaniana be indrindra amin'ny karamany, tsy misy ny hofan-trano na ny trosa.
Ho an'ny fitsangatsanganana mandritra ny Fetiben'ny Lohataona amin'ny taona 2019, dia nisy mpitsangatsangana fohy nahitana mpitsangatsangana 5% bebe kokoa tsy misy fiovana ny vidiny raha toa ka nitombo 10% ny halavirana lava na dia 5% ka hatramin'ny 10% aza ny fiakarana! Ny laharana miorina amin'ny famandrihana Airbnb ho an'ny Fetiben'ny Lohataona tamin'ity taona ity dia nahita an'i Japon ho toerana malaza indrindra izay notsidihin'ny olom-pirenena Hong Kong 2.2 tapitrisa tamin'ny taon-dasa; ary Aostralia faharoa, izay notsidihin'ny olom-pirenena Hong Kong 0.31 tapitrisa tamin'ny taon-dasa.
FIT manjaka any ivelany any Hong Kong! Amin'ireo mpitsidika 2018 ITE 90000 ao anatin'ny roa andro maninjitra, 84% no maniry FIT na vondrona tsy miankina. Manana fampianarana ambony izy ireo (oniversite 42%, 34% aorian'ny ambaratonga faharoa) mety hahazo vola be; mora azon'ny mpivarotra satria boky mihoatra ny 60% an-tserasera mivantana miaraka amin'ireo mpamatsy sy boky 63% ao amin'ny ITE, miaraka amin'ny 19% no tonga amin'ireo fitsidihana "eo an-toerana" ho tonga!
Liana amin'ny dia lalina sy fitsangatsanganana lohahevitra ry zareo! Nanangona valiny 4000 teo ho eo, ny fanadihadiana ITE 2018 hita ohatra ny fahalianan'ny mpitsidika ara-barotra amin'ny Study Tour (28%) sy ny Overseas Wedding (21%); ary ireo mpitsidika ampahibemaso amin'ny fizahantany Eco (35%) sy ny fizahan-tany Sport (23%)!
Ny tranoheva ofisialy ao amin'ny ITE koa dia manasongadina ny fitsangatsanganana lohahevitra! Tamin'ny taon-dasa, ohatra, nanasongadina an'i Crusie i Hong Kong ary nanao seminera momba ny fivorian'ny Cruise, Macau momba ny Gastronomy, Suisse momba ny Sport & Eco fizahan-tany, ary ny mpitsidika dia nilaza fa misy fahasamihafana misy eo amin'ny ramen sy onsen amin'ny prefektiora Japoney isan-karazany sns.
Miaraka amin'ny 85% amin'ireo fampiratiana 700 avy any ivelany, ITE dia iraisam-pirenena be. Manarona ny fitsangatsanganana sy ny fitsangatsanganana MICE. Amin'ireo mpividy sy mpitsidika isam-paritra 12000 ao anatin'ny roa andro raharaham-barotra (fisoratana anarana takiana amin'ny fidirana) 6600 avy amin'ny masoivohon'ny dia sy 2600 MICE / orinasa; ara-jeografika 73% avy any Hong Kong ary mihoatra ny 21% avy any Shina.
ITE 2018 dia nahasarika mpitsidika mpivarotra 2000 avy any amin'ny tanànan'ny 9 Guangdong ao amin'ny Greater Bay Area (GBA), izay misy an'i Guangzhou sy Shenzhen. GBA izay misy an'i Hong Kong sy Macau ihany koa dia manana harin-karena faobe mitentina 1.69 trillion dolara amerikana sy olona 68 tapitrisa. Miaraka amin'ny tetezana mega vaovao miampita ny vavan'ny reniranon'i Pearl sy ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ao Shina hatrany Hong Kong, manantena ny hisarika mpitsidika bebe kokoa avy amin'ny GBA i ITE.
Isan-taona dia manodidina ny 35 ka hatramin'ny 40 ny pavilion ofisialy ITE ary misy 70% mampiseho tsy tapaka ary China sy Japan kosa misy roa lehibe indrindra misy tranoheva 90 eo ho eo. Ny hafa dia misy, ohatra, Hong Kong, Macau, Korea atsimo, Thailand, Nepal ary Kambodza avy any Azia; ary Torkia, Suisse ary Egypt avy any ivelan'i Azia. Mpanentana vaovao amin'ity taona ity, ao anatin'izany ny pavilion sy ny mahaleo tena, dia avy any Sipra, Ekoatera, Istanbul, Moskoa, Madagascar, ary Espana sns, ary antenaina kokoa. Manodidina ny antsasaky ny firenena 50 sy faritra anaovana fampiratiana avy any ivelan'i Azia.
ITE dia manolotra programa B2B sy B2C mpampiranty. Ohatra, ny fanaovana ao amin'ny ITE dia mihoatra ny 100 ny seminera fitsangatsanganana ho an'ny besinimaro sy mpizaha olona iray mahasarika mpijery 200 tsirairay avy; seminera varotra 30 eo ho eo, mpividy sy mpivarotra mifanandrify amin'ny orinasa mifanakalo hevitra momba ny fifanakalozana daty haingana, varotra ary indostria!
Nokarakarain'ny TKS Exhibition Services Ltd ary notohanan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina sy ny fizahan-tany ao amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina sy ny birao fizahan-tany Hong Kong sns., ITE Hong Kong 2019, ny ITE faha-33 (fialam-boly) ary ny ITE MICE faha-14, dia hotanterahina avy amin'ny 13 hatramin'ny 16 Jona 2019 tao amin'ny Hong Kong Convention & Exhibition Center.